Questions/Answers | Nepal Hypnosis Clinic and Training
Stay at Home. Stay Safe.
9851255834, 9851255837, 9851255839 (8 AM – 8 PM),
1115 (6 AM – 10 PM)
प्रश्न: म २३ वर्षीया सक्षम युवती हुँ, तर मलाई अचेल एउटा समस्या आइपरेको छ । म अचेल हरेक कुरा तुरुन्तै बिर्सिन्छु । मलाई समाधानका लागि सुझाव दिनुहोस् ।
प्रश्नका लागि धन्यवाद । तपाईंले आफूमा आइपरेको समस्यालाई बुझ्नु र स्वीकार गर्नु नै पनि समाधानको एउटा उपाय हो । यो उमेरमा नै बिर्सिने समस्या आइपरेका कारण तपाईंमा निरासा छाउने, नकारात्मक सोच आउने, काममा मन नलाग्ने जस्ता व्यवहार देखा पर्नु स्वभाविक हो । तर, तपाईंले आफ्नो समस्या अझै स्पष्ट पारेर लेख्नु भएको भए समाधानको उपाय अझै छिटो हुन सक्थ्यो ।
प्रश्न: मलाई मेरो जिन्दगीदेखि वाक्क लागिसक्यो किनभने मैले धेरै असफलताहरू पाए । मैले सँधैकेही नयाँ काम गर्न खोजे तर समयले कहिले साथ दिएन । ~ सागर कोइराला
म बुझ्छु, तपाईले असफलता भोग्नुपर्दा तपाईलाई गाह्रो भैरहेको छ । आफूले गरेको मिहिनेतले साकार रूप पाओस् भन्ने इच्छा सबैको हुन्छ त्यसैले नै मेहनेत गर्न मन लाग्छ। मेहनतको फल नकरात्मक पाउँदा जिन्दगीसँग दिक्क लाग्नु, आफूलाई समयले पनि ठगेको महसुस हुनुका साथै जिन्दगी बेकार हो भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो ।
प्रश्न: मीना भन्ने युवती मलाई निकै माया गर्थिन् तर मैले उनको प्रस्ताव अस्विकार गरे । तर अचेल म उनलाई मेरो नजिक पाउँछुअनि मलाई उनीसँग बोल्न पाउँदा खुशी लाग्छ । जब उनीसँग अरु कोही बोल्छ, मलाई इर्ष्या हुन्छ । उनी म सँग मात्र बोलुन् भन्ने म चाहन्छु मैले किन उनलाई पहिले अविस्कार गरें भन्ने कुराले तनावमा म अचेल उनीलाई धेरै माया गर्छु भन्न सक्दिन म के गरूँ
~ रोशन रजक, बालाजु, काठमाण्डौं
How to PreventaBully
म १९ वर्षको भएँ । काठमाण्डौमा ६ महिना अघि पढ्न भनेर आएको थिएँ र एउटा साथीसँग बस्छु । मलाई धेरैजसो आफू भित्रभित्रै रीस उठ्छ; आफ्नो बारेमा केही पनि राम्रो सोच्न सक्दिन अनि पढाईमा पनि ध्यान दिन सकिरहेको छैन । मेरो साथी मसँग एकदम हैकम चलाउँछ । उसको चाहना अनुसार मैले काम गर्नुपर्छ। मलाई ऊ पटक्कै मन पर्दैन । तर, त्यसबेला म उसलाई केही भन्न सक्दिन म त मनोविक्षिप्त (ड्पिरेसन) भैसकें । म के गरूँ ? ~ कमल पाण्डे
म बुझ्छु तपाईलाई आफैसगँ रिस उठ्नाले गाह्रो भैरहेको छ । एक त सानै उमेरमा घरबाट टाढा हुनुपर्दा दुःख लागिरहन्छ, त्यसमाथी आफूलाई हैकम चलाउने साथीसँग व्यवहार मिलाउन झनै कठिन हुन्छ ।
My Son Goes Away From Me
म ४५ वर्षको पुरुष हुँ , मेरो एकमात्र छोरा छ । म उसलाई एकदम माया गर्छु तर ऊ मसंग नजिक हुनै मान्दैन । म कति बहाना खोज्छु ऊ संग कुरा गर्नको लागि, तर म जति जति नजिकिन खोज्छु ऊ त्यति त्यति टाढिन्छ । मलाई ऊ किन मसंग भाग्छ भन्ने विषयले असाध्यै पिरोल्छ । मनमा अनेकौंथरि कुरा खेल्छन् र डर लाग्छ । यो अवस्थामा मैले के गर्दा राम्रो होला?
~ पुष्पलाल महर्जन, कलंकी, काठमाडौ ।
Why I Get Angry?
प्रश्न: मलाई बेलाबखत अत्यन्तै रीस उठ्छ । रिसाएको बेला आँखै देख्दिन । रीस मरेपछि लाग्छ बेकार यस्तो गरिएछ । मेरो समस्याको कारण के होला ? के यो समस्या निराकरण गर्न सकिएला ? (प्रश्नकर्ता: दीपक ढकाल)
मनोविद् अर्चना विभोरको उत्तर:
मानिसले हरेक स्थान र समयमा आफू शक्तिशाली छु भन्ने महसुस गर्दछ । हरेक व्यक्ति भन्दा आफू कुनै न कुनै रूपमा शक्तिशाली भएको अनुभव गर्दछ । यदी कुनै अवस्थामा केही कारण आफूले सोचे भन्दा अलग भयो र आफ्नो शक्तिले त्यसलाई कायम राख्न सकेन भने मानिसले आफूलाई कमजोर पाउँछ । यही कमजोरीको आभासले गर्दा मानिसलाई रीस उठ्छ ।
Should I FileaDivorce Paper?
प्रश्न: म ४० बसन्त पार गर्नै लागेको मान्छे परें । मैले विवाह गरेको पनि झन्डै १७ वर्षपुग्न लागेछ । सुरु-सुरुका दिनबाहेक मैले उनलाई मनदेखि माया गर्न सकिनँ । हरेक घरायसी क्रियाकलापमा कुरा नमिल्ने त छँदैछ, कुनै पनि विषयमा कुरा मिल्दैन । हरेक प्रयास गर्दै सँगै बस्ने समय मिलायो, तुरुन्तै झगडा भइहाल्छ । हाम्रा दुई सन्तान पनि छन् । कठोर निर्णय लिन पनि अलि गाह्रो छ । आजभोलि सोच्दै छु, छुट्टिने वा पारपाचुके नै गर्ने । मेरा लागि अब उपयुक्त बाटो के होला? सुझाव पाए आभारी हुने थिएँ ।
प्रश्नकर्ता: कृष्णजङ MD, USA
प्रश्नका लागि धन्यवाद । मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छ । जब ऊ बिस्तारै बढ्दै जान्छ, उसको स्वतन्त्रता घट्दै जान्छ । उसका बन्धनहरू बढ्दै जान्छन् । सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक, राजनैतिक, अर्थिक, धार्मिक, कानुनी बन्धनहरूले मानिसलाई उमेरसँगै बाँध्ने गर्छन् ।
Subscribe to Questions/Answers